စကြဝာ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-01 > ဝဠာ
Als Albert Einstein im Jahr 1916 seine allgemeine Relativitätstheorie veröffentlichte, veränderte er die Welt der Wissenschaft für immer. Eine der bahnbrechendsten Entdeckungen, die er formulierte, behandelt die ständige Ausdehnung des Universums. Diese erstaunliche Tatsache erinnert uns nicht nur daran, wie gross das Universum ist, sondern auch an eine Aussage des Psalmisten: «Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein» (Psalm 103,11-12) ။
ဟုတ်တယ်၊ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တကယ့်ကိုတကယ့်သားတော်၊ ဆာလံဆရာ၏ဖော်မြူလာ "အရှေ့သည်အနောက်မှဝေးသည်အထိ" သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုကျော်။ သိမြင်နိုင်သောစကြာ ၀ evenာထက်ပင် ကျော်လွန်၍ သတိရှိရှိမှုတ်ထုတ်လိုက်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်မည်သူမျှခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတိုင်းအတာကိုအထူးသဖြင့်မမြင်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များသည်ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသီးခြားခွဲထားပါသည်။ သို့သော်ခရစ်တော်၏ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းသည်အရာရာကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့စပ်ကြားကွာဟချက်ကိုပိတ်ထားသည်။ ခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်လောကီသားတို့အားမိမိနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်စေတော်မူပြီ။
ထာဝရမိသားစုအတွက်ဘုရားသုံးဆူနှင့်စုံလင်သောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုမိသားစုအတွင်း၌ ၀ င်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်ထံချဉ်း ကပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုသူ၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွှတ်သည်။
နောက်ညဥ့်နက်ကိုသင်ကြည့်သည့်အခါဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်သည်စကြာ ၀ ofာ၏အတိုင်းအတာအားလုံးထက်ကျော်လွန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ထားရှိသောသူ၏မေတ္တာတော်အတိုင်းအတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သိကြသောအကြီးမားဆုံးအကွာအဝေးပင်တိုတောင်းကြောင်းသတိရပါ။